Ihowuliseyili Uthando Iqabane Couple Umenzi kunye noMthengisi | Into
Le mveliso yongezwa ngempumelelo kwinqwelo!
Jonga kwinqwelo othengela kuyo
Buyela ekuthengeni Qhubeka uphume
Iipizza zeHoodies zePizza
I-Pizza Couple Sweatshirt
UKumkani noKumkanikazi abathandanayo beHoodies
Hubby Wifey Isibini Hoodies
Mnu Nksz. Couple Hoodies
I-Sweatshirt kaKumkani kunye neKumkanikazi
IHubby Wifey Couple Sweatshirt
Mnu Nksz Couple Sweatshirt
I-T-shirt kaKumkani kunye neKumkanikazi
I-T-shirt yomtshato kaHubby Wifey
Mnu Nksz. Couple T-shirt
UTHANDO Hoodies Couple
UTHANDO lwesibini Sweatshirt
Mhlawumbi "uthando" sesinye sezizathu ezibangela ubukho bendalo iphela. Ukuthanda nokuthandwa yeyona mvakalelo intle kwaye intle kweli hlabathi. Yeyona mvakalelo isisiseko kulwalamano ngalunye, nokuba ngumzali kunye nenzala okanye ubudlelwane bendoda nomfazi. Uninzi lwexesha, sicinga ukuba ukuthanda umntu kwanele kubudlelwane.
SKU: # 001 - Ikhona evenkileni
USD $49.00 USD $39.00 (% icimile)
Ukubonisa uthando lwakho komnye umntu kubalulekile njengoko kuthanda. Njengazo zonke ezinye iimvakalelo, uthando kufuneka luxelelwe kwaye lubhiyozelwe ngoku. Izikipa zothando zezithandani zezona ndlela zibalaseleyo zokubonisa uthando lwakho. Ezihempe zikukhonza njengesona sipho sibalaseleyo kwisibini sakho emtshatweni wakho kwaye zinokuboniswa kwizikhumbuzo. Ngokukhula kobudlelwane bakho, iimvakalelo zothando ziya zisomelela ngokomelela.
Nangona kunjalo, akukho magama anokuchaza ezona mvakalelo zothando. Ezi T-shirts zoThando ziyakunika ithuba elihle lokuxelela ilizwe ngothando lwakho. Ikwanika isibini sakho esinye isizathu sokuba sisondele kwaye sibhiyozele uthando lwakho.
* Ulwazi lweMveliso.
Kuya kubandakanywa iseti ye-2 (ii-T-shirts ezimbini), enye yeyasetyhini kunye nenye eyindoda.
100% Umgangatho ophezulu womqhaphu welaphu uya kuqinisekiswa kuwe.
Kukhethwa imibala emihlanu, okt White, Black, Grey, Navy, Red.
Imibala ebonakalayo ebonakalayo iphambili kuthi.
Zonke iisayizi, okt. Ezincinci, eziPhakathi, eziKhulu, ezikhulu kakhulu, ii-2,3 ezikhulu ezikhulu, ziya kukunceda ukhethe kwangoko.
Umzantsi othungiweyo ezantsi kunye nomphetho uya kukwenza uzive ukhululekile.
* Ulwazi loYilo.
Iileta "LO" ziya kuprintwa kwisikipa esinye sothando, kwaye iileta "VE" ziya kuprintwa kwenye ihempe.
Umbala woonobumba uya kuba mnyama, kodwa umbala wehempe uya kukhethwa nguwe.
Hlamba izikipa zakho ngaphakathi uzishiye zome emoyeni.
Okulandelayo: UTHANDO lwesibini Sweatshirt
I-T-Shirt yesiqhelo sothando
Isikipa sothando esihlekisayo
I-T-shirt Yothando I-Couple Unisex
I-T-shirt yokuPhumla kweZithandani
T-shirt YOKUTSHA UMTSHATO
UTHANDO Isikipa nje esitshatileyo
UTHANDO Ukutshatisa isikipa sesibini
T-shirt YOTHANDO LWEValentines
Indlela esisebenza ngayo
Uphando Kwintengo yamaxabiso
Indlela irestyu yaseAustin ebonelela ngayo ngokutya ...
Kutheni izibini kufuneka zinxibe iimpahla ezifanayo
Izimvo ezintathu ezilungileyo zesinxibo
Zinjani i-T-shirts esona sipho silungileyo